Olga Seryabkina: iifoto ezishisayo kwi-Maxim, i-orientation engekho yendabuko, i-Instagram - Ubomi bomntu, umntwana, indoda kunye nentombi
I nkwenkwezi Ubomi bomntu
UOlga Seryabkina: ubomi bomntu kunye nezithombe ezishisayo
U-Olga Seryabkina uyaziwa kangcono njenge-MOLLY okanye i-soloist central ye-"Silver". Intombazana enezintlu ezinqabileyo kunye nezifuba ezinqabileyo, isalente sombongi, umculi kunye nomdlali we-actress. Akanqikazi ukuzala umzimba wakhe omhle, kodwa bambalwa ukulungele ukuvula umphefumlo wakhe. Ukushicilela nje incwadi yakhe ethi "Iwaka" M-"iqoqo leenkondlo kunye neengcaphuno ezivela kwiprose. Kukho ngaphezulu kwazo kuneenkwenkwezi ezivela "ekhishini" likaMaxim Fadeev onokuyicula, ngokuba u-Olya ubhala iimibhalo. Ininzi yale ncwadi inemvakalelo yomntu omnye. Ngubani? Yiba nomonde. Ngeenkcukacha zokuqala ezimbalwa, iinkcukacha ezishisayo zeSeryabkina kunye neengxelo ezivela kwi-biography.
Iifoto ezishisayo zika-Olga Seryabkina kwiphephancwadi lamadoda "Maxim"
Isikhuselo semagazini ngo-Matshi 2017 sahlotshiswe liqela "iSiliva". Amagqabantshini kunye neentambo zamantombazana amancinci athabathela elwandle ukuze afune ukuzonwabisa. Amalungu omzimba osondeleyo kunye noviniweyo ovaliweyo. Ngelo xesha, akukho nto yokungahlambuluki okanye ukungcola - yonke into ibhinqa.
Ifoto efudumele uSeryabkina
Kwiminyaka eyi-10 eyadlulayo, amantombazana (ngoko ngokubunjwa okwehlukile) ajikeleza ihlabathi lonke, aphumelele kwindawo yesithathu kumncintiswano womculo we-Eurovision. Ngaloo ndlela uSeryabkina wabonakala kuqala kwibhendi. Lo mkhwa wokukhohlisa wabhala umxholo wesiNgesi weengoma zomncintiswano, owaba yingozi ekuphuhlisweni kokuhlanganiswa. Kwabo abangazi, u-Olga Seryabkina ungumhumushi oqeqeshiweyo kunye nemfundo ephakamileyo.
Imilenze egqibeleleyo kunye nombingeleli - ukususela ebuntwaneni
Ukongeza, u-Olya udansa ubomi bakhe bonke. Leyo yimfihlo yabafundisi beenxa zonke ngaphandle kwe-photoshop! Ekubuntwaneni, intombazana yayiphumelele ngempumelelo kwimincintiswano yokudansa ibhola. Kwaye namhlanje udlala ekuqeqesheni nakwisiqeshana. Kulo shishini lokubonisa, wafumana, ngokubanzi, ngenxa yokukwazi ukudansa. I-pop yakhe yezobugcisa yaqala ngomdaniso kunye nenkxaso ekuhlanganisweni komculi u-Irakly. Namhlanje u-Olga ungumlobi ophumeleleyo weengoma ezidumileyo kunye nomculi othabatha ngokufanayo kwiiprojekthi ezimbini: "eSiliva" kunye kunye noMOLLY. Ukuxhasa ukuthandwa kweefotshane zeefowuni kunye nezithombe ezishisayo.
Nude Seryabkina ngeMaxim
Ingca eyomileyo njengendawo eqingqiweyo igcwalisa umfanekiso kunye nomdlalo - isimboli sobunye nemvelo kunye nokuhamba kwexesha. Umzimba omhlophe emzimbeni ohamba kunye unikezela ngesithunzi umthunzi wesithandwa kunye nesono. Amehlo agcwele ukulangazelela kunye nomnqweno. Ndifuna ukukholelwa ukuba ngobomi bomntu bukaSeryabkina yonke into iya kuba yindlela ayifaka ngayo kwingcamango yakhe.
Ifoto nguOlga Seryabkina ngaphambi nangemva kweeplastiki
Izindebe zomlomo, amabele amaninzi kunye nomfundisi ngokumalunga nemilinganiselo yombalo womculi. Kodwa ngaba yonke into yendalo? Mhlawumbi inkwenkwezi yenza ukuhlinzwa ngoplastiki? Kwiifoto zokuqala intombazana inomlomo ogqithisileyo kwaye amabele kubonakala amancinci. Imibuzo ngokuphathelele uphando lweplastiki, inkwenkwezi ayifaki. Imfihlo yokungahambi kakuhle kwindlela yokwenza okanye i-botox, i-gyms kunye ne-genetics okanye ukungenelela kokungenelela? Uphendule yena kuphela owaziyo-Olya Seryabkina kunye nemilinganiselo efanelekileyo yesimo. Umzimba wakhe uyamkelwa ngabantu namabhinqa.
I-Sedabkina i-Naked kwikhava leMaxim
Ukuphosa uSeryabkina kuyo yonke into yokukhohlisa kuye kwavela "kuMaxim" ngonyaka ngaphambi kokudubula okuhlangeneyo. Intombazana engabonakaliyo kwipeyinti yegolide ibukeka njengesithomo esinesidalwa.
Iifoto zoo-Erotic zika-Olga Seryabkina kwi-Instagram
Ubomi, iigrasi, iimfihlelo zamabhinqa, iimpendulo kumbuzo obhalisele ... Umculi uyahlonipha abalandeli bakhe kwaye ufumana ixesha lokuthetha nabo. Pribolevshaya okanye ukhathele emva kokufayiliza, uhamba emoyeni, ulayishe iifoto, uprintela amanqaku ngeengxabano malunga nobomi kwiintanethi (VC, Instagram). Iifoto zakhe zentando ayinanto engathandabuzekiyo kunokuba iphephancwadi elithi "Maxim". Ngokomzekelo, nantsi le mfanekiso kwi-swimsuit:
Seryabkina kwi-swimsuit, umfanekiso
Okanye u-selfie onomlomo ovulekileyo, ulwimi oluphangaleleyo kunye nentambo ephakamileyo:
Ukuqwalasela ingxelo yomculi kwi-intanethi ye-intanethi, inkwenkwezi kufuneka ibuke kwi-100% nakwivenkile evamile.
Ubomi bomntu siqu ka-Olga Seryabkina: Umculi wezobugcisa bendabuko?
Iimveli neenkwenkwezi, uthando lwentandokazi, indoda kunye nabantwana - yintoni inyaniso yalo? U-Olga Seryabkina akafaneli adibane, kodwa uyaqonda i-lyric biography kunye nomoya wenyama yomculi ngokufunda incwadi yakhe.
UOlga Seryabkina wayengumlingani wesini
UOlga uyavuma ukuba ngaphambi kweminyaka engama-20 wayenomdla wokuthandana kunye noluntu olungekwenkanga. Ingqungquthela ethi "Kate", eyapapashwa kwincwadi - yinyaniso. Oku kwakuyimvakalelo enamandla, eqinisekileyo, yahlala entliziyweni kunye nentombazana. Kuthetha ukuba iinkumbulo ziza, kodwa i-heroine yenkondlo iyaboyika, ifihla kwimva. Amaqhosha amaxesha amade alityelweyo abonakaliswa ukukhanya okukhulu kweemvakalelo neemvakalelo - zibonisa uthando lokuqala. I heroine ikhumbula indlela abathandekayo abaye bafihla ngayo wonke umntu, badlala inxalenye yamantombazana emini, kwaye busuku bajika kwiimferensi. Olu dlelwane lwaphela ngentlungu, leyo uSeryabkina ezama ukuyikhumbula. Uqinisekile malunga nothando lwendabuko, kodwa sele esitshintshile imemori yakhe yento entsha kunye nomntu omnandi.
Uthando luyekile, kwaye imikhwa ishiywe:
U-Olga Seryabkina unomntwana nomyeni?
Ixesha lothando olungenakuqhelana nalo ludlulile. Olya uthanda indoda. Ngubani na yena: Irakli, Max Fadeev, uYor Creed okanye uDmitry Nagiyev? Mhlawumbi intlanzi kwesikrini yindlela nje yokufihla ubuhlobo bokwenene. Ukujonga ishedyuli esityebi yeenkwenkwezi kunye ne-amateur ngqo kwi-Instagram, umntwana kunye nentsapho ayinayo. Kodwa kwiphepha le-selebreti lidla ngokukhawuleza iifoto kunye nabantwana. Ngokomzekelo, u-Olga useenkampani yentombazana eyadutshulwa kwisiqeshana se-band "Isilivere":
U-Olga Seryabkina no-Oleg Miami, iqabane lomculi
Akunabantwana okwamanje. Njengomyeni wakhe. Ngoxa kunomntu othandekayo kuphela - umntu ozinikezele kwisiqingatha sencwadi, indoda ehamba ngeenkwenkwezi kwenye yeziqeshana ze-MOLLY kunye nomntu osayina isithombe kunye noSeryabkina kwi-Instagram ngegama elithi "yam".
UOlga Seryabkina no-Oleg Miami
UOleg Miami yindoda yentliziyo kwaye, mhlawumbi, indoda ezayo ka-Olga. Ubuntu bendaba. Wakhanyiswa kumabonakude kwiprojekthi "iNdlu 2". Kamva waba ilungu le "Izwi". Kwaphela ixesha elide laba bantu badibana ngokufihlakeleyo, bebangela ukuhleba ngeenxa zonke zobomi bomntu kunye neenveli zecala.
Seryabkina kunye neMami, ifoto
Ngaba kuyinyaniso ukuba u-Olga Seryabkina wayeneenveli kunye no-Egor Creed noMaxim Fadeev?
Ubomi bomntu wenkwenkwezi yinto enesizathu sokuhleka nokunyaniseka. Abasebenzi kwiingubo ze-frank, iifoto kwi-swimsuits kwaye zizele, zizele iziqwenga zothando ... uSeryabkina ubonisa ubundlobongela bakhe kunye nokukhangisa ngqo. Ngokuqinisekileyo ulungele ukubonisa umzimba wakhe ngaphandle kokuhlazeka, ngenxa yokuba wazinikela kumadoda amaninzi, kwaye wahamba ukubonisa ibhizinisi ngokubodwa etaweni?
Olga Seryabkina kunye noMaxim Fadeev
Ubudlelwane noMaxim Fadeev eSeryabkina bude kwaye bubuchule. Ngokomculi, umbhalo ovela kwiingcamango zakhe uhlala kumculo kaMaxim ngokugqibeleleyo: amagama afika ezintloko zawo ngokwawo. Umphumo woqhagamshelwano olunjalo kunye nobunzima bebhasi ebhaliweyo kwiziko lovelisi likaMax Fadeev. Inyaniso yokuba phakathi kuka-Olya noMaxim ubudlelwane obusebenzayo kuphela, uthetha ukubambisana kweminyaka eyi-10. Yaye apho kukho indawo yokufumana iveli, ukuxabana, i-scandals kunye nokuhlukana ubudlelwane kubakho.
Olga Seryabkina kunye no-Yegor Creed
Umshicileli ubonisa uSeryabkina inveli kunye no-Egor Creed, kunye naye obethela i-duet phantsi kwegama elibi le-MOLLY. Xa ebuzwa yizintatheli zeCredit xa etshata, umculi waphendula wathi: "Xa uSeryabkina uthi" Ewe. " Imisebenzi ye-duo ishushu kakhulu kubantu abangaziwayo kwabanye abantu. Kodwa amahemuhemu malunga neveli kunye nomlingani "kwinkonzo" u-Olga uyala. Ukudlala ikhamera nobomi bokwenene akusoloko kufana.
Abantu abathandayo nobomi bomntu kaYevgeny Mironov
Ubomi bomntu siqu kaCatherine Catherine Klimova. Iifoto zamadoda nabantwana
Ubomi bomntu u-Igor Petrenko. Iifoto zabokuqala abafazi, amantombazana amantombazana nabantwana
Xenia Borodina watshintsha njani: ngaphambi nangemva kweeplastiki
Luhlobo luni lwesithambiso elona lukhulu kakhulu?
I-Salmon nge-anyanisi ebhaka kwi-foil
Imisenze yokuhlobisa abantwana ngezandla zabo
Ukukhetha ifenitshala yabantwana
I-Apple ixutywe ngewayini
Ndiyakucima amanqaku okuzalwa?
Cocktail "iMay Tai"
Ukulahla kwiindawo ezininzi
Ngaba isikhumba sethu sidinga itoniki?
Imiba yoMnyaka omtsha-u-2017 kwiqela elincinane, eliphakathi, eliphezulu kunye nelungiselelo, isikolo esiprayimari. UkuNyaka uNewutsha kwiimeko zeeholide zezingane
IsiNtaliyane nzima i-Parmesan ushizi
Uthando olungenakulibaleka kunye nokwenzelwa usuku
Ukulungiswa kobuso ngoncedo lokwakheka
I-pizza kunye ne-mozzarella, i-bell pepper kunye ne-tomato